खेर जाने बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्न प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति, किन्ला त भारतले ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/खेर जाने बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्न प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति, किन्ला त भारतले ?
६ साउन, काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएर खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत अब विदेशमा बेच्न सकिने भएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगालादेशतर्फ पठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्व स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र बंगालादेशवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा विक्री वा खरिद गर्न प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गने निर्णय गरेको हो ।
तर, यस्तो विद्युत खरिद तथा बिक्रीका सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने शर्त छ ।
लकडाउनपछि घटेको विद्युत् खपतको दर पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि अब वर्षामा बढी हुने विजुली के गर्ने भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ ।
असोजसम्म भारतको डे-अहेड र टर्म अहेड मार्केटमा जान ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ । भारतको एनभीभीएनले यस्ता मार्केट सञ्चालन गर्छ, जसमार्फत आफूलाई बढी हुने बिजुलीबारे जानकारी राखेर बोलकबोलमा उच्च मूल्य दिने कम्पनी वा संस्थालाई बेच्न सकिन्छ ।